Madax hore oo wax weyn ku tilmaamay in IGAD shir ku qabsato Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madax hore oo wax weyn ku tilmaamay in IGAD shir ku qabsato Muqdisho
Mareeg.com: Siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka ayaa shirkii wasiirrada arrimaha dibadda IGAD ee shaly lagu qabtay Muqdisho ku tilmaamay guul usoo hoyatay ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Dr. C/qaasin Salaad Xasan ayaa shirkii wasiirrada arrimaha dibaddda IGAD ee shalay lagu qabtay Muqdisho ku tilmaamay guul usoo hoyatay dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed, wuxuuna qamsoomida shirkaasi ugu hambalyeeyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
“IGAD iney ku shirto Xamar waa arrin muhiim ah, ha yeeshee arrin cusub maaha Soomaaliya, waxaa ku shiri jiray IGAD iska daaye Arican Union madaxdeeda, balse wadciga jiray ayaa diidanaa in lagu shiro haatan ka hor, shirka maanta lagu qabtay Xamarna waa wax la soo dhaweeyo” ayuu yiri Dr. C/qaasin Salaad Xasan.
R/wasaarihii hore ee Soomaaliya, Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa isna dhankiisa guul taariikhi ah ku tilmaamay shirkii IGAD ee lagu qabtay Muqdisho, wuxuuna ku ammaanay madaxda dowladda qabsoomida shirkaasi, isagoo hey’adaha ammaanka ugu hambalyeeyay sida ay ugu quuleeysteen sugidda mniga caasimadda.
“Aad iyo aadaan ugu faraxsanahay in muddo dheer kadib shirkii IGAD lagu qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, farxad weyneyna u tahay ummadda Soomaaliyeed, waana wax loo baahnaa xaqiiqdii, waxaana Mahad iyo hambalyaba u dirayaa dowladda Soomaaliya, guud ahaan madaxweynaha R/wasaaraha, baarlamanka iyo ciidamada amniga” ayuu yiri R/wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Cadde oo wareysi siiyay Radio Muqdisho.
Danjire Maman Sidikou “Shirka IGAD ee Muqdisho wuxuu cadeeyey horumarka ay gaartay Soomaaliya”